Isku Deygii Wah-Wahda Ubbo Ee Ina Cumar Dacay Oo Kaashanaya Caga Mardaf Iyo Gurey Ayaa Sabaaxato Suxulada Loogu Cadeeyay (Caano Ka Dhan) - Cakaara News
Isku Deygii Wah-Wahda Ubbo Ee Ina Cumar Dacay Oo Kaashanaya Caga Mardaf Iyo Gurey Ayaa Sabaaxato Suxulada Loogu Cadeeyay (Caano Ka Dhan)
Minneapolis(CN) Arbaco.March.18.2015, sida lawada ogsoon yahay waxaa DDSI si buuxda looga sifeeyay guud ahaanba awoodii iyo jiritaankii Ubbo oo waayadii danbe kuwar danbaysay uun meelo katirsan qurbaha oo ay ku dhuumaalaysanaysay halkaas oo ay shaqadoodu isugu biyo shubatay hadal aan wah wahda ayyga waxba ka duwanayn.
Kooxda Ina Cumar Dacay oo halgankoodu yahay ku xabeebashada qaylada ayyga oo kale ayaa isku dayday in ay isu ekaysii yaan xubno ku halgamaya qaylada, wakhtigii ay qurbajoogtu buux dhaafiyeen garoonka ee ay madaxwaynaha DDSI soo dhawaynayeen, waxaana aad loogu riwaayadsaday xubnahaas oo ay ilaalinayeen ayyda maraykanka sida aad kadaawateen wararkayagii hore.
Hadaba isku deygan oo sabaaxatu suxulo cadays ah kala kulamay halkaas ayaa waxaa maal mahanba ku mashquulsanaa gudi isku dhaf ah oo ay kamid yihiin Ina Cumar Dacay, Caga mardaf, Gurey iyo Axmed Nashaad oo kasoo horjeeday qorshaha horumarineed ee socdaalka madaxwaynaha.
Xogo dhab ah oo lahelay ayaa sheegaya in gudigan isku dhafka ah ay si gaar ah ugu xil saarnaayeen iskudaygan kadib markii lahelay dad badan oo haya fariimo qoraalo ah sida facebook-ga fariimahaas oo dhahaya waa inaan si wada jir ah u weeraraa iskana kaashanaa... taasina ay fashileen qurbajoogta Soomaaliyeed ee reer Itoobiya iyo geeska Afrika, taageerayaasha EPRDF, iyo taagerayaasha DDSI iyagoo sheegay inay kutaageerayaan madaxwaynaha horumarka kasocda DDSI.
Xubnahan ayaa ahaa xaafadii khaaska ahayd ee ina cumar dacay iyo C/fataax Caga mardaf qoyskiisa qaxootiga ah oo isaga uun kahadhay liiska qaxootiga ee qoyskana uu kujiro. Waxaana tusaale ah in Caga mardaf wakhtigii uu Talyaaniga tagay ee uu ahaa kuxigeenka madaxwaynaha uu 4 bilood ku xanibnaa arinta liiska oo uu Computerku ku dhagay. Xiligaas oo xukuumada DDSI kala hadashay laanta ocdaalka markii uu qaadanayay kaarka dibloomasiga ee hada laga qaaday.
Sidoo kale waxaa xubnahan ka dhex muuqday wiil yar oo C/raxmaan Gurey ilmo adeer yihiin kaasoo lasheegay inay saaxiibo khaas ah yihiin. Waxaana jira labo xubnood oo kale oo iyagana sawirkooda labaadhayo dibna lagasoo sheegi doono.